यौन/स्वास्थ्य Archives - Page 115 of 115 - inaruwaonline.com
दसैं भन्नासाथ मासु भन्ने कुरा सबैको दिमागमा आइहाल्छ । पहिले–पहिले मासु खानलाई दसैं नै कुर्नुपथ्र्यो भने अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले मानिसहरू नियमित रूपमा दिनहुँजसो मासु खाइरहेका हुन्छन् तथापि दसैंको मासुको कुरै अलग हुन्छ । दसैंमा घरमै खसी–बोका काटिने हुँदा आन्द्राभुँडी, कलेजो आदि विभिन्न भागका परिकार बनाएर खाने चलन छ । यस्ता मासुमा प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ । स्वस्थ मानिसलाई पनि धेरै...
आइतबार, कार्तिक ०१, २०७२
के हो सेक्सटोयज ?
यौनका लागि प्रयोग गरीने कृत्रिम यौन सामाग्रीलाई सेक्सटोयज भनिन्छ । यस्ता सामाग्री पुरुष र महिला दुवैका लागि पाउन सकिन्छ । पुरुष र महिलाका यौन अंगका आकृतिमा पाइने यस्ता सामाग्री ठ्याक्कै लिंग वा यौनी जस्तै हुन्छन् । यस्ता सामाग्री माँड्ने, दल्ने र भाइब्रेटरमा पाइन्छ । सेक्सटोयज पुरुषहरुका लागि विभिन्न आकारमा पाउन सकिन्छ । पुरुषहरुका लागि रिङ, ओरल स्टिमुलेटर, योनि आदि पाउन सकिन्छ । रिङलाई लिंगमा औं...
मानव जीवनमा सुताई पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । कसरी सुतिन्छ भन्ने कुराले पनि मानव जीवन कति सुखी छ भन्ने थाहा हुन्छ । सामान्यतय मानिसहरु आफ्नो सुताइबारे धेरै सोच्दैनन् । तर, ‘बेड–लाईफ’ ले पनि कतिपय अवस्थामा सिंगो जीवनशैलीलाई धेरै सहयोग गरिरहेको पश्चिमा केही वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । केही वैज्ञानिक र मनोविज्ञहरुका अनुसार नांगै सुत्नुका मुख्य फाइदाहरु यस्ता छन् : १. हाइजेनिक हुन्छ : राती सुत्ने...
कुपोषण हटाउन स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय सक्रिय
अर्घाखाँची २३ असोज – अर्घाखाँचीका महिला स्वास्थय स्वयं सेबिकाहरुले जिल्लाको कुपोषण घटाउन पहल गर्ने बताएका छन । उनीहरुले पहिले देखिनै स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएकोमा अब कुपोषणको दर हटाउन सक्रियताका साथ लाग्ने बताएका छन । अर्घाखाँचीका बिभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएको मातृ शिसु तथा बाल्यकालिन पोषण सुधारकालागि सामाजिक ब्यबहार परिबर्तन सञ्चार सम्बन्धि समुदाय स्तरीय तालिमका सहभागी महिला ...
शनिबार, आश्विन २३, २०७२
के गर्भवतीलाई यौनचाहना कम हुन्छ ?
गर्भावस्थामा सम्भोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिले पनि विवादास्पद छ । दसजनामध्ये कम्तीमा एक महिला बच्चा जन्माउनुअघि यौनसम्पर्क राख्दैनन् । यस्तो अवस्थामा केलाई सामान्य अवस्था र केलाई चिन्ताजनक अवस्था भन्ने ? गर्भावस्थाले जीवनका धेरै गतिविधिमा प्रभाव पार्छ । एक अनुसन्धानका अनुसार गर्भ रहन गएको छ भन्ने थाहा भएपछि महिलाको यौनेच्छा कम हुन्छ । गर्भवती महिलाको यौन चाहना गर्भ नरहेको अवस्थामा भन्दा...
अल्छी लागिरहन्छ ? जिउमा फुर्ति आउँदैन ? कारण यस्तो हुनसक्छ
के तपाइँलाई सधै थकान महसुस भैरहन्छ ? निद्रा पनि नलाग्ने समस्या छ ? अनि व्यायाम गर्न पनि जाँगर चल्दैन वा जिउमा उर्जा नै हुँदैन ? यदि थकान जिवनको अभिन्न पाटो बनेको छ र आफ्ना सामान्य दैनिक कामकाजहरु पनि गम्भीर रुपले कठीन कार्यको रुपमा परिणत हुँदै गएका छन् भने होसियार हुनुहोस्, तपाइँ विश्वका त्यस्ता मानिसहरु मध्ये एक हुनुहुन्छ, जसलाई सरीरमा आवश्यक पर्ने लवणहरु पर्याप्त मात्रामा प्राप्त हुन सकेको छै...
कम रक्तचाप अर्थात् हाइपोटेन्सन, जसमा शरिरको रक्तप्रवाह निकै धीमा हुन्छ । लो ब्लड प्रेसरका कारण रिंगटा लाग्ने, बेहोस हुने, जिउ गल्ने, कमजोर हुने, आँखाले तिरिमिरी तथा धमिलो देख्ने, स्वास फेर्ने कठीन हुने जस्ता समस्या देखा पर्दछन् । स्वस्थ शरिरको रक्तचाप १२०/८० हुन्छ । जब रक्तचाप ९०/६० भन्दा कम हुन थाल्छ तब रक्तचाप खतराको स्तरतर्फ झरेको बुझ्नुपर्छ । रक्तचाप कम हुँदा त्यसले मस्तिष्क, मुटु तथा मृग...
मौसम परिवर्तनसँगै जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो
पाँचथर, २० असोज / मौसम परिवर्तनसँगै जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । रुखाखोकी, ज्वरो, टाइफाटडलगायत भाइरल रोगको बिरामीको चाप बढेको अस्प्ताल प्रशासनले जनाएको छ । अहिले दैनिक ७० देखि ८० जनाको हाराहारीमा बिरामी आउने गरेको अस्पतालका डा.ओमप्रकाश यादवले जानकारी दिनुभयो । बिरामीको चाप बढेपछि अहिले भुइँमा राखेरसमेत उपचार गराइराखिएको उहाँले बताउनुभयो । एकहजार ५०० को शैय्याको यस अस्पताल भएका...
लाजका कारण एचआइभी सङ्क्रमित औषधिका लागि अन्यत्रै
इलाम, १८ असोज । एचआइभी सङ्क्रमितहरु समाजमा आफ्नो गोपनीयता खुल्ने डर र लोकलाजका कारण जिल्ला बाहिर गएर औषधि सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ ।जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन थालिए पनि लाज र गोपनीयता खुल्ने डरले औषधि र उपचारका लागि झापाको मेची अञ्चल अस्पताल र भारतसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ ।कतिपयले भारतबाट समेत औषधि किनेर ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालम...
आपसमा यौन सम्पर्क गर्दा महिलाले छुट्टै आवाज निकाल्छन् । आवाज त निकाल्छन् तर किन निकाल्छन् त यस्तो आवाज यो सबैका लागि रोचक विषय हुन सक्छ । यसबारेमा केही वैज्ञानिकले आवाज निकाल्नु नाटकमात्र हो भनेका छन् भने केही अनुसन्धानकर्ताहरुले आननदको अनुभूति हो भनेका छन् । साथै केहीले सेक्सको समयमा महिला अचेत अवस्थामा पुग्ने भएकाले यस्तो आवाज निकाल्ने जनाएका छन् । तर यसबारे पछिल्लो अनुसन्धानबाट निकालिएको नि...
आइतबार, आश्विन १०, २०७२